Shirkadaha maraakiibta oo aad uga walaacsan xaaladda Bariga Dhexe | Saxil News Network
Shirkadaha maraakiibta oo aad uga walaacsan xaaladda Bariga Dhexe
June 15, 2019 - Written by editor
Image captionMarkab ku gubtay marinka Hormuz
Ururka ugu weyn ee ay ku mideysan yihiin milkiilayaasha maraakiibta caalamka ee BIMCO, ayaa ka digay xaaladda ka sii daraysa ee marinka Hormuz iyo Khaliijka Carabta kadib weerarradii ugu dambeeyay ee halkaa lagula beegsaday maraakiibta shidaalka.
Madaxa ammaanka badaha ee ururkaasi, Jakob Larsen, ayaa sheegay in xiisaadda ay hadda gaartay meeshii ugu saraysay iyadoo aanu dhicin wax dagaal ah.
Laba markab ayaa Khamiistii lagu qarxiyay marinka Hormuz, waxaana halka lagu beegsaday ay qiyaastii 46 kilommitir koonfur uga beegan tahay xeebaha Iran.
Xukuumadda Washington ayaa ku eedeeysay Iran inay ka dambeysay qarxayadaasi, iyadoo ciidanka badda ee Maraykanka uu faafiyay muuqaal uu sheegay inuu muujinayo xooggaga sida gaarka ah u tababaran ee Iran oo miino badeed aan qarxin ka fujinaya mid kamid ah maraakiibta.
Maamulka Trump oo cunaqabatayn dib ugu soo rogaya Iran
Iran oo cunno u daabushay Qatar
Tehran ayaa si adag u beenisay eedeymahaasi, waxaana ay weerarrada ku eedaysay koox aanay magacaabin oo ay sheegtay inay doonayso waxyeelleynta xiriirka ay Iran la leedahay caalamka intiisa kale.
Dhanka kale madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping, oo dalkiisa iyo Maraykanka khilaaf ganacsi dhex yaal ayaa ballanqaaday in taageerada uu dalkiisa siiyo Iran joojinayn. Qiyaastii shan meeloodow meel shidaalka dunida oo dhami wuxu maraa marinka Hormuz oo Iran sheegtay in nabadgelyadiisu tahay xil iyada saaran.
Xiisadda Bariga Dhexe ka taagan ayaa beryahan isa soo taraysay waxaanu Maraykanku u diray gobolkaasi ciidamo dheeraad ah iyo maraakiib dagaal.
Waxa ay aad sare ugu kacday tan iyo markii uu xukunka Maraykanka la wareegay madaxweyne Donald Trump sanadkii 2017, kaasoo ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee uu Obama la galay Tehran, waxaana uu cunaqabateyn dheeraad ah kusoo rogay Iran.
Khilaafku ma aha wax dhex yaal Maraykanka iyo Iran oo keliya, waxa uu sidoo kale u dhaxeeyaa Iran iyo Sacuudiga oo ah laba quwadood oo kala mad-hab ah, khilaafka siyaasadeed ee dhex yaallaana saamayntiisa ku yeeshay dalal badan oo gobolka ah
Cadho ka dhalatay gabadh ‘dabaq laga soo tuuray’